दिन दुई गुणा रात चौगुणा काम गर्नुपर्ने वर्तमान सरकार किन अलमलमा ? - Experience Best News from Nepal
दिन दुई गुणा रात चौगुणा काम गर्नुपर्ने वर्तमान सरकार किन अलमलमा ?
झन्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेको वर्तमान सरकारको आयु बढीमा ६० महिना हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको यो सरकारको आयु ६ महिना सकिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो तीन तहको निर्वाचन सकिएपछि गठन भएको यो सरकारको मुख्य लक्ष्य नै विकास र समृद्धि थियो । इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारको रुपमा उदाएको यो सरकारलाई काम गर्न कुनै बाधा–अड्चन नभए पनि ६ महिना अलमलमै बिताएको छ ।
निर्वाचनमा भोट माग्दा मात्र हैन सरकार गठनलगत्तै आमजनतालाई दिलाएको आशा र भरोसा बिस्तारै टुट्दै गएको छ । गफ मात्र गर्ने, काम केही नगर्ने भनी प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भैरहेको छ ।
सरकारले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसकेको भनी हरेक दिन अखबारहरुले लेखिरहेका छन् । सरकारका हरेक निर्णयहरु आलोचित भएका छन् । यो वा त्यो बहानामा प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिएन भन्ने यो सरकारलाई छुट छैन । दिन दुई गुणा रात चौगुणा काम गर्नुपर्ने सरकार किन अलमलियो ? अहिले सवत्र उठेको प्रश्न यही हो ।
संविधानअनुसार थुप्रै कानुन बनाउन बाँकी छ । कतिपय बनेका कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने आमगुनासो आइरहेको छ । धेरै संवैधानिक निकायहरु पदाधिकारीविहीन छन् । कर्मचारी समायोजनको मुद्दा पेचिलो बनिरहेको छ । खबर अाजकाे नेपाल समाचारपत्रमा छ ।